Daahir Geelle “Lafta Gareen ayaa dhexdhexaadinaya
Daahir Maxamuud Geelle oo ka mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa BBC u sheegay in ay socdaan dadaalo dheeri ah oo la doonayo in la isugu keeno dowladda federaalka iyo musharixiinta.
Iyagoo wakiil ka ah Hogaamiyaha DG Galmudug waxay sheegeen inay si cad u go’aansadeen inay kalsoonida kala noqdaan isku soo dhaweynta Hogaamiyayaasha Dowladda Federaalka & xubnaha wafdiga.
Geelle ayaa tilmaamay in Hogaamiyaha Maamulka Koofur Galbeed C / casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen uu u arkay inuu yahay dhexdhexaadiye, sidaa darteedna ay u siiyeen howsha, isla markaana wuxuu shaaca ka qaaday inay ku soo biiri doonaan shaqsiyaad kale oo daneynaya isu soo dhaweynta labada dhinac.
“C / casiis Lafta Gareen, madaxweynaha Koonfur Galbeed wuxuu yiri waxaan dhex dhexaad ka noqonay, maadaama madaxweyne Qoor-Qoor uu sheegay inuusan dhex dhexaad ka noqon karin howlaha socda, waxaan rajeyneynaa inuu isu soo dhawaado si dalka uusan uga dhicin doorasho xitaa hal. tuulada. ” dalka gudihiisa ” Sidaa ayuu yiri Daahir Maxamuud Geelle.
Midowga Musharixiinta Hogaamiyaha 2021 waxay la kulmeen Hogaamiye Axmed Maxamed Kaariye DG oo qoorta laga soo qaadi karo mas’uuliyad ka saran wada xaajoodka xal looga gaarayo in laga gaaro cabashadooda ku aadan maaraynta doorashooyinka.
Laakiin horraantii toddobaadkan, Axmed Qoor-Qoor wuxuu si cad u sheegay inuusan wax jawaab ah ka helin Jubbaland, Puntland iyo Midowga Musharraxiinta, inkastoo ay beeniyeen eedeymahaas.
a toll-free quantity for traumatized folks
Ciidamada DFS & koox hubaysan oo ku sugan Muqdisho